Talooyin Ku Saabsan Cimilada Ku Saabsan Sida Loo Horumariyo Fursada Kala Duwan
Hirgelinta warbixinta saxda ah, nadiifka ah, oo wax ku ool ah ee ololeha raadinta "Search Engine Optimization" waxay muujinaysaa wax badan oo ku saabsan fikradahaaga ganacsiga iyo fulinta hawlaha. Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, gaadiidka gudaha waxaa abuuray soo gudbiye been abuur ah, kuwa khaladka ah, iyo shaqaalaha xafiiska waxay saameyn ku yeesheen warbixinnada iyo bandhigyada Google Analytics ee shirkado badan. Sida laga soo xigtay Khubar khabiir, Ivan Konovalov, gaadiidka gudaha wuxuu saameyn ku yeelan karaa bogagga internetka iyo ganacsiyada internetka oo yareynaya gaadiidka marka la barbar dhigo goobaha waaweyn.
Marka laga reebo taraafikada gudaha ee laga soo galo boggaaga ayaa muhiim u ah sidii loo hubin lahaa ammaankaaga internetkaaga. Ka gaabinta ka reebista gaadiidka gudaha ee soo-saara booqashadaada iyo calaamadahaaga shaqaalaha ee boggaaga ayaa kaa dhigi kara inaad ka baxdo ganacsiga. Dhowaan, warbixinnada daabacan xirfadlaha SEO s wuxuu caddeeyay in gaadiidka gudaha uu yareeyo heerarka xayiraadda ee goobaha. Waxyaabaha ugu dambeeyay ee ku dhici kara markaad udiyaarineyso ololehaaga waxay gaadhay heerar hoose oo xaraash ah maaddaama ay bixiyaan ereyga muhiimka ah ee isbedelka ah ee aan ku habboonayn doohnaanta Google algorithm.
Go'aanka go'aan qaadashada xogta ka kooban jidadka gudaha waxay horseedi kartaa shaqo la'aanta. Macaamiishaada iyo soo-booqdayaashaada ayaa si fiican ula macaamila website-kaaga marka loo eego adiga iyo shaqaalahaaga..Qaar ka mid ah siyaabaha iyo qalabyada ayaa loo dhigay si looga fogaado calaamadaha la yaqaan, goobaha lidka ku ah, spam gudbinta, iyo taraafikada gudaha oo la xariira macluumaadka Google Analytics. Halkaan waxaa ah muujin muujinaysa in ay kaa caawin doonto abuurista iyo ku dar fayrka muuqaalka si looga saaro taraafikada aan loo baahnayn ee tirakoobyadaada.
Sidee loo abuuraa filter filim?
Ku bilaw nidaamkaaga adiga oo saxiixaya Google Analytics. Riix 'Isticmaal Fursad' icon si aad u abuurto shaandho cusub
Ku buuxi 'Diido Gaadiidka gudaha' adoo ah magacaaga cusub ee falanqeeya oo isticmaal adeega horay loo cayimay
Abuurso cinwaankaaga IP adiga oo adeegsanaya khadka taleefanka taleefanka kaddibna koobi cinwaanka.
Ku soo celi kumbuyuutarka Google Analytics oo ku dheji cinwaanka IP-ka ee hore loo geliyey sanduuqyada la bixiyey.
Riix 'icon' key si aad u badbaadiso qaybtaada iyo ka reebida gaadiidka gudaha ee laga soo saaro cinwaankaaga IP
Talooyin ku saabsan sida loo tijaabiyo filterkaaga aragtidaada
Furi Google Analytics oo riix '' Warbixinta cusub 'ee boggaaga sare. Fiiri bogga bidix ee boggaaga oo guji muuqaalka guud. Furo tab cusub, waxaad u tagtaa shabakadda boggaaga. Ka tag bogga jeeg furan galkaaga GA mar kale.
Si aad u hubisid in filter-kaaga si sax ah u shaqeynayo, booqashadaada kulanka xidhiidhka waa inaanu ka muuqan boggaaga marka aad fuliso shaandhada.
Tilmaamo cusub iyo qalabyo ayaa lagu sameeyay Google si ay uga caawiso ganacsiyada internetka inay bartilmaameedkooda bartilmaameedsadaan iyadoon la kulmin heerar hoose oo xawaare ah iyo weeraro fara badan. Ku rakib Google Analytics iyo cusbooneysiin ka hor inta aan laga reebin bots, spam gudbinta, nacfiyada, iyo baabuurta gudaha ee saameynaya warbixinnada ganacsigaaga. Hirgelinta isbeddelada istaraatiijiyadaada ayaa muhiim u ah sidii hubinta bartaadaada la cusbooneysiiyey si looga fogaado galitaanka fayraska iyo hanjabaadaha khatarta ah ee boggaaga. Abuuritaanka marti-geliyeyaasha saxda ah ayaa sidoo kale ka caawiya ka-saarista domainsyada iyo goobaha leh wacyigelinta gudbinta iyo gawaarida geedka Source .